भारतीय कांग्रेसको पराजयबाट नेपाली कांग्रेसलाई पाठ - Sabal Post
जगन कार्की– देशमा प्रजातन्त्र आएपछी पार्टीमा मोटा घाटा , सुकीला मुक़िलाको हावी हुनेछ । त्यस बिरुद्ध आम सामान्य कार्यकर्ताले फेरी एक पटक संघर्ष गर्नुपर्नेछ ।” कांग्रेसको हालको अवस्था जस्ताको तस्तै चित्रण गर्ने बीपी कोइरालाको कथनबाट यो आलेखको सुरुआत गरौं ।
पार्टी नेतृत्व पारिवारिक पकडमै राख्ने लोभले भारतमा गान्धी परिवारले कांग्रेस सक्यो। बिजेपीले ३०० बढी सिट जित्त्तैगर्दा काँग्रेस आई ५२ सिटमा खुम्चिन पर्यो। गान्धी परिवारको बिरासत अमेठीमा राहुल गान्धी आफै पराजित भए। यसैसाल राजनीतिमा ल्याइएकी प्रियंका गान्धीको क्याम्पेन असफल भयो। देशभित्र शुरु भएको मोदीको बिरोधलाई विश्वासिलो ढंगले नयाँ नीति तथा कार्यक्रमबाट जनमतमा रुपान्तरण गर्न नसक्नु, परम्परागत ढंगको बिरोध र ठेकेदारी, बिरासतको राजनीतिक सुत्र प्रयोग कांग्रेसलाई घातक बन्यो । पार्टीले चुनाव हारेपछि राहुल गान्धीले त कम्तिमा राजीनामासम्म दिएका छन् भलै यो राजिनामा स्विकृत हुने सम्भावना छैन। नेपालमा गत बर्ष भएको चुनाव हेरौं, पार्टीको हार पश्चात पनि कांग्रेस सभापति देउवाले त राजिनामा के नैतिक जिम्मेवारी समेत स्वीकारेनन्। अन्य नेताहरूलेपनि आफै पराजित भएको चुनावमा आफ़्नो पनि जिम्मेवारी रहेको कुरा पनि बोध गरेनन बरु एकोहोरो नेतृत्वलाई मात्र भनिरहे ।
४ पटक प्रम बनि सकेका देउवाले आफ्नो इज्जत र प्रतिष्ठालाई कायम गर्दै अझै पनि नयाँ नेतृत्वलाई मार्ग प्रसस्त गरेर बिदा हुनुपर्नेमा फेरी आफै सभापति बन्ने तरखरमा लोभ देखाइरहेका छन । यो देउवाको सत्तालोलुपता मात्र हैन कांग्रेस भनेर जीवन फ़्याकेका अरु नेताहरूको पनि अपमान हो । राहुल गान्धीले यो पटक चुनावमा नोटबन्दीदेखि मोदी सरकारका असफलताहरुलाई मुख्य एजेण्डा बनाएका थिए तर भ्रष्टाचार विरोधी मुद्धाको जरो समातेर ल्याइएका योजनाले मोदीले जीते । भारतीय कांग्रेसको हारको मुख्य कारण गान्धी निराधार भ्रष्टाचारका आरोप प्रमाणित गर्न ब्यस्त रहे। मोदीका आर्थिक नीतिको असफलता कोट्याऊन असफल भए भने आर्थिक कुरा बाहेक अन्य कुराको चुरो समाउन असफल भए । दोश्रो कांग्रेसको बिगतका चुनावमा झै आवस्यक गठबन्धन बनाउन असफल भयो। जसका कारण जस्तै दिल्ली र उत्तर प्रदेशमा हुन सक़्ने पनि गर्न असफल भए।
नेपाली कांग्रेसले बिगतमा गरेका गठबंधन आफु सक्किने अरु बन्ने गरी मधेशी दल, संघीय समाजवादी, राप्रपा र नया शक्तिसंग फितलो र असफल गठबन्धन गरेको थियो । जस्को परिणाम ओली नेतृत्वको सरकार देशमा छ। यो अवस्थामा ओली नेतृत्वको नेकपा सरकार आफै बदनाम हुँदै र घुमेर सत्ता आफ़्नो पक्षमा आउने हाल कर्मकाण्डी प्रतिपक्ष भूमिकामा मात्र कांग्रेस छ। भारतको लोकसभा चुनावले यस्तो सोचाई र रणनीति गलत सावित गरिसकेको छ । केहि कांग्रेसी युवा र बुद्दिजिविहरु देउवा बहेक अरुले नेतृत्व गर्न नसक्ने गरिव मानसिकताले ग्रसित छन् । पार्टी पद्दतिले भन्दा हैकम र भागबण्डा अनि आन्तरिक गिरोहले चलाएको छ। यो भनेको भारतीय कांग्रेस आइकै बाटोमा अग्रसर हुनु मात्र हो। देउवाले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा र यसको बिकासको लागी गरेका कामको नजरअन्दाज गर्न किमार्थ सक़िन्न तर अब आफ्नो योगदान अनि सोको इज्जतको लागी पनि कुर्सीमा टासीएर रहन देउवाका लागी घातक छ । लोकतन्त्रको लागी जीवन नै उत्सर्ग गरेका, कदमजम जस्ता समावेसी योजना ल्याएका, सुदूर पश्चिममा विकासको कामको थालनी गरेका, परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै स्थानीय, प्रदेश देखी केन्द्रसम्मको चुनाव गरेर अतुलनिय योगदान गरेका देउवाको लागी अब अरुलाई मार्ग प्रसस्त गरेर इमान र निष्ठाको राजनीतिक संस्कारको नेतृत्व गर्ने सुनौलो अवसर युगले दिएको छ । कांग्रेस र नेतृत्वको यो हालतमा तत्काल सुधार नभए आगामी ४ बर्षमा नेपाली कांग्रेस पनि भारतीय कांग्रसको हविगतमा पुग्ने निश्चित छ । सुध्रिने अझै प्रसस्त समय छ । कांग्रेसले जनता मात्र हैन आफैभित्र गर्नुपर्ने स्वजागरणका काम बूँदागत रुपमा हेरौंः
१ देउवाले तत्काल आगामी चुनावमा नेतृत्व नलिने घोषणा गर्ने गराउने। देउवालाई तत्काल यो महसुस नगराएर आसेपासेलाई त फाईदा होला तर कांग्रेसलाई हुनेवाला छैन। २ कांग्रेसले अहिले भएका मतदातालाइ जोगाएर राख्न सकेको छैन। नयाँ मतदातालाई आकर्षण कसरी गर्ने स्पस्ट नीति तर्जुमा गरेर स्थानीय स्तरबाट कार्यकर्तालाई जिम्मेवार बनाएर परिचालित गर्दै लैजाने। ३ बिद्यमान भ्रस्टाचार र अराजकताका बिषयमा व्यापक जनदबाब सिर्जना गरेर जनजीविकाका सवालहरु समातेर बस्ने । ४ जसरी पार्टी पराजय पछि गुमेको शाख जोगाउन बिश्वप्रकास शर्मालाई प्रवक्ता बनाएर ठुलो टेवा पुग्यो अब हाम्रो आगामी प्रम गगन थापा हो भनेर भन्ने हिम्मत गर्न सक्नुपर्दछ भलै प्रक्रियागत ढंगले आउदा अरु नै बनुन । ५ बिश्वभर रहेका कांग्रसको सिद्धान्त मान्ने बिज्ञहरुलाई चुनाव जित्दा नियुक्ति मात्र खान आउने हैन देशको आगामी आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य यातायात लगायत यावत नीतिहरु कस्तो हुनु पर्ने अहिले नै तयार गर्न पार्टीको थिङ्क ट्यााङक बनाउने र निरन्तर उनीहरुको सुझाव र सल्लाहमा भावी रणनीति तय गर्ने । ६ भट्टी , ठेकेदारी र माफिया केन्द्रित राजनीति बन्द गरेर तत्काल कार्यकर्ताहरुको आचरणमा आमुल परिबर्तन ल्याउने अन्तरिक सफाई अभियान चलाउने । स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताको छवी नसुध्रिए जनमत पाउने सम्भावना छैन । हालसम्म कांग्रेसमा जोसंग पैसा र पहुँच छ त्यसलाई छानेर नेता बनाइदिने , पदहरुकै किनबेच हुने गरेको स्पष्ट नजिरहरु छन् अब यो व्यापार चल्दैन।
७ बिरासत, नेतृत्वमा चाप्लूसी र पहुँचका आधारमा हैन अब नेता वा नेतृत्व लिन चाहनेले आफ्नो क्षेत्रमा बढाएको वा घटाएका जनमत र कार्य प्रगतिको आधारमा मूल्याँकन गर्ने बिधी अपनाईनु जरूरी देखिन्छ। ८ नेता, कार्यकर्ताहरूलाइ सामाजिक संजाल र प्रविधीको तालीम र सदूपयोग गर्ने चेतनाको जरूरी । युवा नेताहरूमा चाप्लूसी र चौकडी गर्न नपर्ने गरी पद्धति र कामको आधारमा मूल्याँकन गर्ने बिश्वासिलो आधार तयार गरिनुपर्ने । ९ बीपीले सामान्यीकरण गरेको आर्थिक सामाजिक खाका जस्तै वर्तमान परिप्रेक्ष्य सुहाऊँदा आर्थिक सामाजिक नीति सामान्य जनताले बुझ्ने भाषामा सन्देश प्रवाह गर्नसक्ने नेतृत्व निकास गर्ने। १० नेताहरूका बिलासी चरित्रमा सुधारगरी समाजवादी चरित्रको बिकास गर्ने । नेतृत्व बिकासको तालिका बनाएर हरेक नेताको वार्षिक कार्य प्रगति, त्रुटी र भावी योजना बनाउन संगठन विभागको एक सेल तयार गर्ने। ११ प्रतिक्रियाको मात्र राजनीति छोडेर सृजनसिल लोकतान्त्रिक आन्दोलन र अभियानको बिकास र प्रयोग गर्ने । निरन्तर चिन्तन र नयाँपनको खोज गर्ने विभाग गठन गरी प्रचार प्रसारको अभ्यासलाई ससक्त बनाउने।अंग्रेजीमा बयबस्थापनको एक प्रख्यात भनाइ छ “Failing to Plan is Planning to Fail ” अर्थात सफल हुने योजना बनाउन असफल हुनु नै असफल हुने योजना गर्नु हो । कांग्रेस पराजयको १ वर्ष नाघीसक्दा पनि सुधारको स्थिति छैन । समग्रमा कांग्रेस नया परिस्थितिमा कहाँ, कसरी सुध्रियो ? देशलाई कसरी भावी नेतृत्व दिनेछ ? त्यसका लागी के गर्दैछ ? जनतासंग कसरी जोड़ीएको छ र तीनको भावना कसरी समेटेको छ ? यी प्रश्नहरूको जवाफ कागज र लफ्फाजी भाषणमा मात्र हैन काम र व्यवहारमा देखाउन नसके भरखरै भारतीय कांग्रेसले दोश्रो पटक बेहोरेको लज्जास्पद हार जस्तै खराब परिणाम स्वीकार गर्न कांग्रेस तयार भए हुनेछ ।
देश छोडेर आईएसमा गएकी युवतीलाई अमेरिकाले प्रवेश…
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष जीवनभर सूचीकृत संस्थामा काम…
माया र एक्सनको मिश्रण : रणवीर